Uhlelo lwekhwalithi - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
Imfuneko Yakho Yekhwalithi
Sikulungele ngokuphelele ukuphatha noma iziphi izidingo zakho zekhwalithi. Besineminyaka emakethe manje ngohlelo olusunguliwe nolwamukelwe kepha nokho siqhubeka nokwenza ngcono amazinga ethu ukuhlangabezana nokulindelwe amaklayenti ethu uma kukhulunywa ngekhwalithi yomkhiqizo.
Ngakho-ke kungukuthi izikhwama zethu zingancintisana nayo yonke imikhiqizo yamazwe omhlaba efana ne-TOV, CSCV, SGS, TUV ne-ITS njll.
Abakwa-OEM bazibophezela ezidingweni zabathengi futhi siqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo wethu. Ukwaneliseka kwakho kuyinto yethu yokuqala eza kuqala. Uma uzithola unganelisekile sikunikeza ukubuyiswa kabusha komkhiqizo noma ubuyisele imali yakho.
Ukubheka Ukulawula Okusuka Kumphakeli Kuya Kulayishwa
Izinkinga Zokwethembana Zibhekene Nesipiliyoni Sethu
Kulula ukuyekethisa ekulawulweni kwekhwalithi eChina. Izinto azicaceli lutho lapha njengoba izinkampani eziningi zivame ukufumbathisa ukulawulwa kwekhwalithi kweqembu lesithathu. Ukugwema lokho, siqashe iqembu lethu le-QC futhi basebenza ngokwabo ngaphandle kokuphazamiseka okuvela efemini. Abakwa-OEM benze isiqiniseko sokuthi benza imisebenzi yabo ngokwethembeka ngokulandela imithetho eqinile engabavumeli ukuthi banikele esilingweni sokwenza imali eyengeziwe.
Ukulawula Ukukhiqizwa Kusuka Kubahlinzeki Kuze Kufike Ekulayisheni
Ngekhwalithi asisho ikhwalithi yokukhiqiza kuphela, kufaka phakathi nokulawulwa kokunikezwa ngaphambi kokuthi siqale ukukhiqizwa kwezinto ngobuningi. Ngaphandle kwalokho, futhi kungumsebenzi wethu ukulayisha ngokucophelela amaphakheji okugcina esitsheni ukuletha ngokuphepha emnyango wakho. Ngakho-ke, ochwepheshe bethu be-QC babheka yonke inqubo kusukela ekuqaleni kuze kube sekulayisheni.
Izigaba ezahlukahlukene zeNqubo ye-QC
Umsebenzi wabo uhlanganisa ukuqonda izidingo zakho nokudlulisa yonke imininingwane ngolimi lwesiShayina egumbini lesampula. Futhi bathatha intshisekelo entengo nasezingeni lekhwalithi elilindelwe ngokusikisela ukuthuthuka okumbalwa egumbini lesampula.
Ochwepheshe bethu ekamelweni lesampula basebenzisa isikhathi esiningi kwizidingo zakho nokucaciswa ukuze bakunikeze inani elifanele kakhulu elizokusiza ukuthi ufinyelele inani lakho elibhekiswe kulo. Ngesikhathi sokusampula, uhlu lwamazwana obuchwepheshe lwakhiwa futhi ekukhiqizweni okukhulu.
Lo ngumhlangano wokukhiqiza wangaphambilini ofaka bonke ochwepheshe, abathengisayo kanye ne-QC abayingxenye yephrojekthi yakho. Yonke imininingwane ephathelene nephrojekthi yakho iyaxoxwa ie inqubo eyinkimbinkimbi yokukhiqiza, amaphuzu ekhwalithi nemininingwane yokupakisha.